5 Nwepu Uche - Udo Ogwu
Home » blog » 5 na-eburu echiche
5 na-eburu echiche
Ogologo oge ole ka ị na-arụ ọrụ, onye ọ bụla nwere ọtụtụ ụbọchị mgbe ọ na-adịghị eche ka ịga ụlọ mgbatị ahụ. N'ụbọchị ndị dị otú a, ọ dị mfe ịnọ na ụra wee tie bọtịnụ ọkpọsịrị na mkpu. Otú ọ dị, ị nwere ike ịme onwe gị ka ị nọgide arụ ọrụ site na ịzụta ihe mgbatị ahụ kwesịrị ekwesị.
Ndị na-egbuke egbuke
Ònye kpọrọ asị akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ? Ọ bụrụ na ịchọrọ n'ike mmụọ nsọ ụfọdụ, ịkwesịrị ịgbakwunye ndị sneakers abụọ na-enwu gbaa n'ọdụ ụgbọ oloko gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ị ga-ahọrọ otu ụzọ nke kachasị mma mgbatị gị. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-amalite inwe obi ụtọ banyere onwe gị ma bụrụ dị njikere ịkụ mgbatị ahụ ihe mbụ n'ụtụtụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ akpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbuke, ị nwere ike ịmalite ịkpụ ha n'èzí mgbatị ahụ. Ịchọrọ enyemaka maka ịchọta ụzọ dị mma? Ikwesiri ịkụ ụlọ ahịa ụlọ ahịa gị na mpaghara gị ma rịọ maka enyemaka site n'aka otu n'ime ndị na-abịa ya. Otu n'ime ndị ọrụ ahụ ga-enyere gị aka ịchọta ụzọ kwesịrị ekwesị nke ga-adaba na nkwụnye ụkwụ gị na ụzọ dị iche iche.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ agba gị oke, ị kwesịrị ịlele online. Ịkwesiri ịkpachara anya mgbe ị na-azụ akpụkpọ ụkwụ n'elu weebụ iji zere ịzụta ụda na-ezighi ezi. Jide n'aka na ị na-ele nhazi sita n'ihi na ha niile abụghị otu.
Ị kwesịrị itinye ego na uwe mgbatị ị ga-eyi n'èzí mgbatị ahụ. Mgbe ị na-eyi sweats dị nro, ị ga - eche dịka a ga - esi na - Ọ bụrụ na ị na-ewepụ oge mgbe ị na-agbanwe maka mgbatị ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-eche na ị na-eji ajị agba gị rụọ ọrụ n'ihi na ndị uwe ejiji ejiji aghọwo ihe siri ike.
Ọ bụrụ na ị na-eyi sweats ka ị rụọ ọrụ, ị gaghị ewelata minit iri na-agbanwe tupu ị kụrụ mgbatị ahụ. Ọzọkwa, ị na-eyi akwa uwe gị na-abụghị ebe ntụrụndụ na-enye gị ohere ịkwaga onwe gị n'ụbọchị dum. Mgbe ị na-eyi akwa akwa, ị ga-enwe mmetụta nke mmụọ nsọ ka ị na-agbago n'elu steepụ kama ịga ije.
N'ihi ngosipụta ha, agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na uwe ejiji ka ejiji ejiji. Mgbe ị na-azụ ahịa, ị ga-ahụ ihe dị iche iche nke na-agbaghara agbaghara, ụdị ihe siri ike, ụda akwa, na akwa ákwà. Ọ bụrụ na ihu igwe dị nro ma dị egwu, ị nwere ike ịnye ụyọkọ leggings iji welie mmụọ gị.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa maka ụdị leggings n'ịntanetị, ịkwesịrị ịmara ihe nha gị. Dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị na-azụta ụdị ọnụ ọnụ dị ka leggings omenala site na MoveU, ị kwesịrị inye gị nha kpọmkwem.
I nwere ike igosi gi ihe egwu gi site n'itinye onwe gi elu n'ime ntim. Ime nke a nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-amalite mkparịta ụka. Jide n'aka na ị na-ahọrọ mkparịta ụka nke na-agwa gị okwu ma gosipụta mmetụta gị. Ị nwere ike ịzụta ihe dị otú ahụ n'elu akwa ma ọ bụ mee ka ha mee gị karịsịa.
Ịkwesịrị ịhọrọ okwu mkparịta ụka pụrụ iche nke na-enye gị ohere ịkwado ihe gị ma dabara àgwà gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịmalite ịchị ọchị mgbe ọ bụla ị ga-ahụtụ nke elu gị na enyo, ị ga-enwe ike ibuli mmụọ gị.
Ngwá nkiri mkparịta ụka nke na-arịgo ikpere ga-eme ka ntụgharị dị n'ụkwụ gị ma mee ka ị dị mma. Ọzọkwa, ha dị mma maka igbochi veinsose veins ma nwee ike imeziwanye arụmọrụ gị na mgbatị ahụ. Ihe nkpuchi mkpakọ na-egbochikwa ịba ụba nke mmiri n'ime anụ ahụ gị, nke bụ n'ezie ihe dị mma ịchọrọ banyere ụzọ ahụ isi na-esi na-agba mgbe a na-eme mgbatị.
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ị ga-eyi obere mkpịsị ma ọ bụ leggings na mgbatị ahụ, inye otu nkpuchi mkparịta ụka ga-eme mkpebi gị mfe. Ọ bụrụ na ị na-adị mgbe niile na ụkwụ gị mgbe ị na-arụ ọrụ, ị kwesịrị ị na-eche na ị ga-eji sọks nrụpụta gị rụọ ọrụ. N'ụzọ dị otú a, ị ga-ahụ ha ogologo oge, nke pụtara na ị ga-aghọrọ oke uru.
Ọnụ ego mgbatị, egwuregwu, na comfy ga-enye gị ohere nweta ihe mgbaru ọsọ gị n'oge ọ bụla. Ọzọkwa, ị ga-enwe mmetụta dị mma banyere onwe gị, nke pụtara na ị ga-aga n'ụzọ ị ga-esi nweta ndụ ka mma.
April 26, 2018 Akwụsị blog, Clothing Enweghị asịsa
Ntuziaka: Yuri Elkaim